Cagta OL - OL: Khiyaanada Sylvinho, halyeeyga kooxdan wali wuu ka fakarayaa - Olympique Lyonnais - FOOT 01 - TELES RELAY
ACCUEIL » SPORTS OL - OL: Khiyaanada Sylvinho, halyeeyga kooxdani wali wuxuu qabaa - Olympique Lyonnais - FOOT 01
Cagta OL - OL: Khiyaanada Sylvinho, halyeeyga kooxdan wali wuxuu qabaa - Olympique Lyonnais - FOOT 01
Waxaa loo magacaabay macalinka OL dhamaadka May, Sylvinho waxaa shaqada ka ceyriyay afar bilood ka dib. Difaacii hore ee kooxda, Cris wuxuu ka qoomameynayaa dhaqsaha badan bixitaankiisa ninka ay isku wadanka yihiin.
Khibraddiisa si fiican ayey u bilaabatay. Labadii guul ee ay ka gaareen Monaco iyo Angers, Sylvinho wuxuu umuuqday inuu la mid yahay rajooyinka uu dhigay OL. Afar bilood kadib, ugaarsiga ayaa ku dhamaaday daafaca reer Brazil, saacado yar ka dib guuldaradii ka soo gaartay kulankii Saint-Etienne. Khibraddii ugu horreysay ee tababare weyn ayaa markaa u aheyd guuldarro kooxdii hore ee bidix, laakiin mid ka mid ah xulufadiisa, oo loo yaqaan Lyon, ayaa doonayay inuu qaato daafaca reer Brazil. Wareysiga loogu talagalay Sidaas darteed CagCree wuxuu ka hadlay bixitaankan deg-degga ah, wuxuuna rumeysan yahay in Jean-Michel Aulas, iyo Juninho, aysan siinin waqti ku filan Sylvinho.
« Nasiib darrose, Sylvinho ma uusan helin waqti uu ku shaqeeyo. Waa tababare da 'yar oo leh qaabab, falsafad. Wuxuu isku dayay inuu tan meel geliyo kooxda, laakiin natiijooyinka uma aysan saamaxeynin inuu kalsooni helo. Xaaladahaas, midka ugu horreeya ee lagu bixiyo guuldarooyinkaas had iyo jeer waa tababaraha. Waxaan u arkaa wax laga xumaado maxaa yeelay, aragtidayda, tababarahu wuxuu u baahan yahay waqti uu ku ogaado shaqaalihiisa, isku dhex daro falsafadda naadiga iyo inuu la qabsado. Saddex ama afar bilood gudahood, Suura gal maahan. Waxaan u maleynayaa in aan la siinin fursad uu ku muujiyo waxa uu runtii mudan yahay ... Waan hubaa inuu guuleysan doono. Waa nin himilo leh, kaasoo raba inuu hore u socdo, sidii markii uu ciyaaryahan ahaa. Si fiican ayaan isaga uga aqaan isla xaruntii tababarka, waana ogahay inuusan quusan doonin. Lyon wuxuu ahaa marxalad wax lagu barto isaga, khibraddan, xitaa taban, waxay u adeegi doontaa mustaqbalka lama huraan ", Ayuu yiri bilayska, kaasoo shaqadiisii ​​Sylvinho ee tababare ahaana ay ka dhammaatay.
Zlatan Ibrahimovic Isbedelka Jirka (2000-2019) - VIDEO
Sport – football : Un mini – tournoi de football dédié à la communauté Bamegwou de Douala – Lewouri.info – un regard alternatif sur le Cameroun
Argentina ayaa u safreysa Sacuudiga si ay ciyaar saaxiibtinimo ula ciyaarto Brazil - VIDEO
200andMe's 23 $ Tixraac caan ah oo Tijaabada DNA ah ayaa durbaba la dhimay ilaa 99 $ Black Friday qiimaha - BGR
Sida loo helo xirmo cusub ee Disney + oo leh Hulu iyo ESPN + xayeysiis la'aan - BGR
Kiisaska Christian Askada: sababta isagu
Hindiya: Waa maxay xadka sharciga lacageed? SC wuxuu weydiisanayaa keydka garsoorayaasha 7 inuu go'aansado | Wararka Hindiya
DADKA & LIFESTYLE7,495
Video dheeraad ah3,432